Koonfur-Galbeed oo soo bandhigtay shuruudaha laga doonayo xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Maamulka Koonfur-Galbeed, ayaa isku diyaarinaya soo dhisida xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee maamulkaasi, iyadoona ay socdaan kulamo ay leeyihiin odayaasha dhaqanka ee deegaannadaasi.
Guddiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada Baarlamaanka 2aad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay shuruudaha laga doonayo xubnaha u sharaxan ka mid noqoshada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Shuruudaha laga rabo Xildhibaanada waxaa ka mid ah in uusan ka yareyn 25-sano, islamarkaana uu bixiyo lacag is-diwangalin ah oo aan la shaacin tiradeeda.
Dhowaan ayaa Guddiga farsamada soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Koofurgalbeed Soomaaliya waxa ay soo bandhigeen jadwalka soo xulista xildhibaanada cusub.
Guddiga ayaa sheegay in aan la aqbali karin, musharax xildhibaannimo oo aan buuxinin shuruucda ay guddiga soo bandhigeen.